ကြည့်ရှုသူတိုင်း အူတွေ အသဲတွေယားသွားလောက်အောင် အမိုက်စားပုံစံလေးလုပ်ပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Cele Cupid
ကြည့်ရှုသူတိုင်း အူတွေ အသဲတွေယားသွားလောက်အောင် အမိုက်စားပုံစံလေးလုပ်ပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
EverBest M | June 9, 2021 | Celebrity | No Comments
ဆောင်းယွန်းစံ ဟာ ဖြူ ဖွေး နုဖက် နေတဲ့ အသားရည် လေးတွေ အပြင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှတရား တွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဝတ် စား ဆင်ယဉ် မှုတွေမှာလည်း ခေတ်ပေါ် ဖက်ရှင် လေးတွေအပြင် မြန်မာဆန်ဆန် ဖက်ရှင်ဝတ်တွေကို လိုက်ဖက်မှုရှိအောင် ဝတ်ဆင်တတ် တာကို တွေ့ရပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို ဆောင်းယွန်းစံ က ပရိသတ်တွေ အတွက် သူမရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။
ယခုတစ်ခါ မှာတော့ မင်းသမီး ဆောင်းယွန်းစံ က ပရိသတ်တွေ အသည်းယားဖြစ်လောက်မယ့် tik tok ဗီဒီယိုလေးကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေး လာခဲ့ ပါတယ်။ကိုရီးယားမင်းသမီး တစ်ယောက် လို့ ထင်မှတ် ရလောက်အောင် အလှ တရားတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဆောင်းယွန်းစံလေးက အနုပညာ လောက ထဲကို အကယ်ဒမီ ရွှေကြိုအဖြစ် အားဖြည့်ပါဝင်ရင်း။
လက်ရှိ မှာတော့ အနုပညာလမ်းခရီးကို အကောင်းဆုံး လျှေက်လှမ်းလာနိုင် ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဆောင်းယွန်းစံ ကတော့ ဗီဒီယို ဇာတ် ကားတွေ ထဲမှာ လည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင် နေ သလို photo Shooting တွေကို လည်း ရိုက်ကူးနေသူ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အနုပညာ နယ်ပယ်မှာ ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်နေရတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အော င်လည်း ကြိုးစား လုပ်ကိုင် နေတဲ့သူ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော် … . ။
ref : tik tok myanmar
ေဆာင္းယြန္းစံ ဟာ ျဖဴ ေဖြး ႏုဖက္ ေနတဲ့ အသားရည္ ေလးေတြ အျပင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ အလွတရား ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ဝတ္ စား ဆင္ယဥ္ မႈေတြမွာလည္း ေခတ္ေပၚ ဖက္ရွင္ ေလးေတြအျပင္ ျမန္မာဆန္ဆန္ ဖက္ရွင္ဝတ္ေတြကို လိုက္ဖက္မႈရွိေအာင္ ဝတ္ဆင္တတ္ တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလို ေဆာင္းယြန္းစံ က ပရိသတ္ေတြ အတြက္ သူမရဲ့ ခ်စ္စရာပုံရိပ္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။
ယခုတစ္ခါ မွာေတာ့ မင္းသမီး ေဆာင္းယြန္းစံ က ပရိသတ္ေတြ အသည္းယားျဖစ္ေလာက္မယ့္ tik tok ဗီဒီယိုေလးကို သူမရဲ့ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ တင္ေပး လာခဲ့ ပါတယ္။ကိုရီးယားမင္းသမီး တစ္ေယာက္ လို႔ ထင္မွတ္ ရေလာက္ေအာင္ အလွ တရားေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး ေဆာင္းယြန္းစံေလးက အႏုပညာ ေလာက ထဲကို အကယ္ဒမီ ေရႊႀကိဳအျဖစ္ အားျဖည့္ပါဝင္ရင္း။
လက္ရွိ မွာေတာ့ အႏုပညာလမ္းခရီးကို အေကာင္းဆုံး ေလၽွက္လွမ္းလာနိုင္ ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေဆာင္းယြန္းစံ ကေတာ့ ဗီဒီယို ဇာတ္ ကားေတြ ထဲမွာ လည္း ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေန သလို photo Shooting ေတြကို လည္း ရိုက္ကူးေနသူ ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါ့အျပင္ အႏုပညာ နယ္ပယ္မွာ ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္ခင္ေနရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာ င္လည္း ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ ေနတဲ့သူ ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္ … . ။
ဆံနွယ်ရှည်ရှည်လေးတွေ နဲ့ အတူ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အမူအရာလေးတွေ နဲ့ ချစ်အားပိုစေတဲ့ သံသာမိုးသိမ့်
ျမင္သူရင္ကို လႈပ္ခါသြားေအာင္ အရမ္းခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ စတိုင္လ္ ေလးနဲ႔မိမိုက္လြန္းေနတဲ့ ေမာ္ဒယ္ မိုးပြင့္ျဖဴ